[War-bixin]:-Is-beddellada Adduunka Ka Socda, Iyo Majaraha Aqoonsiga Somaliland
Tuesday September 11, 2018 - 09:38:48 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Hore ayaa loo yidhi, dhacdooyinka ayaa taariikhda sameeya, dhacdooynkana dadkaa sameeya, oo Eebe u siiyey maskax mugweyn oo awood u leh samayntooda iyo hoggaamintooda ba. Sidaas darteed, dhacdooyinka waa la hoggaamiyaa ama aya
Hargeysa-(Caalami-News)-Hore ayaa loo yidhi, dhacdooyinka ayaa taariikhda sameeya, dhacdooynkana dadkaa sameeya, oo Eebe u siiyey maskax mugweyn oo awood u leh samayntooda iyo hoggaamintooda ba. Sidaas darteed, dhacdooyinka waa la hoggaamiyaa ama ayagaa ku hoggaamiya. Haddaba, dhacdooynka dunida ka socda ayaa abuuray isbeddello qoto dheeridooda iyo baaxadooda ku beddelaya qaababkii fekerka syaasadda iyo dhaqaalaha ee hore kuwo cusub oo saameeyana keenay Geeskan Africa.
Haddii loo fiirsado waxaa la arki kara in Isbeddelladan gobol ka socdaa ay xidhiidh toosa la leeyhiin isbeddelka baaxada weyn ee qotada dheer oo labaatankii sannadood ee ugu danbeeyey dunida ka socdey. Halka markii hore Maryankanka iyo xulafadiisu keligood dunida ku amar ku taaglay jireen ayaa laga soo bilaabo 1998kii, waxaa soo muuqanayey ifafaalaha soo bixitaanka Shiinaha iyo Ruushka (China and Russia), kuwaas oo horumarkoodu gaadhay heer aan qarayn karin iftiinka ka soo shaacaya oo si ballaadhan oo degdeg ah dunida ugu fidaya. Maxaa yeelay waxay noqdeen xoogag caalami ah, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo militeri ahaan ba.
Isbeddelkaasi waxuu keenay inuu aduunka ka abuurmoXaalada Cusub oo Caalami ah(New World Order) kaas uu hormood ka yahay ururka Iskaashigacaalamigi ah ee loo yaqaan BRICS, oo ay ku bahoobeen dalalka, Brazil, Russia, India, China, iyo South Africa, oo metala 3.1 billion oo qof oo dunida ku nool ama boqolkiiba afartan iyo kow Aadamaha (41 % dadka dunida ku nool).
Dawladihii dalalka Adduunka Saddexaad oo markii hore aan haysan xoog kale oo ay ku dano-darsadaan, amase hadday doonaan ku doorsadaan Maraykayn iyo xulafadiisa ayaa hadda helay dawlado kale oo ay si siman oo caddaalad iyo isqaderin leh wax u wada qabsan karan kuwaas oonoqatay xaqiiqo jirta oo ka mid adduunka Cusub (new world order). Halkaas oo ay hubka iyo daqaale ahaanba kula wadaagi karaan si ku dhisan iskaashi xushmad leh.
Maanta dawlado-goboleedyani (Regional Powers) waxay koritaan ahaan raacayaan wadada horumarka ee loo yaqaan bilawga isbiirsiga lacagta ama maalka (Primary Accumulation of Capital) kaas oo ah mid ka mid ah qawaaniinta koritaanka hantida iyo dawladda. Mitaal ahaan Turkiga qiyaasta dhaqaalihiiu ama GDP giisuwaxuu gaadhay $909 bilion Dollar, halka Saudi Arabia uu gaadhay $646 billion Dollar, halka Imaaradka Carabta uu gaadhay $348 billion Dollar. Dhaqaalahaas xad-dhaafka ah ayaa keenay damaca ah ku luga fidsiga xaggan Geeska Africa, oo fursado dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed oo dhammaystiraya istiratigiyadda militari oo looga baahday marin-biyoodkan Geeska Africa, oo lagama maarmaan ka dhigtay istiratijiyad ahaan in si degeg ah loo halqafo.